Kubuye ukuzethemba kuWayde ewina umjaho - Impempe
Kubuye ukuzethemba kuWayde ewina umjaho
April 19, 2021 Impempe.com
UWayde van Niekerk
UWayde van Niekerk ongumpetha ophethe iredodi ku-400m lokuwina kuma-Olympic Games akaphoxanga ngempelasonto njengoba ezidlele amahlanga kwiSizwe Medical Fund ASA Senior Track and Field Championships eTuks Stadium, ePitoli.
Uwewin indondo yegolide ebangeni lika-200m wenza isikhathi esingu-20:38, kanti uthi ukuwina kwakhe sekuvuselele umuzwa wobumpetha kuye, kwabuya nokuzethemba.
Uthe usazoqhubeka nokuzikhandla ngokuziqeqesha njengoba umgqigqo wakhe ethi uwuthole kahle.
Khonamanjalo, uBenjamin Richards ulale isibili wazitholela indondo yesiliva kanti ezintokazini uJustine Parlfaman nguye obengumpetha enza isikhathi esingu-23;64 ethola indondo yegolide kanti ubexinwe eduze nguShirley Nekhubui owenze isikhathi esingu-23;77.
Ebangeni elide, uGlenrose Xaba uvikele ngempumelelo isicoco sakhe ku-10000m, enza isikhathi esingu-33;35.23, ebangeni lika-5000m khona uPrecious Mashele nguye umpetha njengoba enze isikhathi sika-13.42.31
Previous Previous post: Bekuqhilika izihlathi kuZinnbauer echazwe abePirates
Next Next post: Kuqhuzuke abhekiwe ekudleni isicoco kwiGladAfrica